PUBG Championship Open to Myanmar E-sport Players | Myanmar Business Today
Home Business Local PUBG Championship Open to Myanmar E-sport Players
Local e-sport players can sign up to compete in the PUBG Mobile Myanmar Championship 2020 Spring Split, through which they can enter PMCO (PUBG MOBILE Club Opens) SEA Final.
Online registration for PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split is open through February.
“The Myanmar Championship is exciting. You can enter international competition through this and will have the chance to compete with the best teams from other countries,” said Andrew Manugian, head of gaming operations at Tencent Thailand.
“We decided to organize the Myanmar Championship because we have seen development with great potential here. We believe that the competition will bring forth the best teams in Myanmar to compete in the PMCO SEA Final,” he said.
Registered players must organize their own teams and compete in the Online Qualifier in two stages between March 1 and 16.
There will be 60 groups with 20 teams each in the first round, to be held during March 1-12. A total of 120 first- and second-rank teams will be divided into eight groups of 15 teams each for the second round, to take place March 13-16.
Sixteen teams who reach the final round this year and the two teams who won first and second prize at PUBG MOBILE Myanmar Championship Offline 2019 will be eligible to join PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split, to be held March 29 at Yangon Convention Centre.
The prize for the winner is K15 million; for the first runner-up, K10 million; for the second runner-up, K6 million; and for the third runner-up, K3 million. The other teams ranked between 5th and 8th will be awarded K1.5 million each and those ranked 9th to 18th, K1 million each.
Four Myanmar teams who win PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split, along with 12 teams from Laos, Singapore, Brunei, Philippines, Cambodia, and Timor-Leste will compete in the PMCO SEA Wildcard Final.
The competition is held twiceayear with entrants from Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Laos, Cambodia, Singapore, Timor-Leste, Brunei and the Philippines.
အရှေ့တောင်အာရှ အဆင့် PUBG ပြိုင်ပွဲအဆင့်တက်လှမ်းနိုင်မည့် ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ E-sports ကစားသမားများ စာရင်းသွင်းနိုင်
အရှေ့တောင် အာရှဒေသအတွင်းအဆင့် ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် PMCO (PUBG MOBILE Club Opens) SEA Final ပြိုင်ပွဲအထိ မြန်မာလူငယ် E-sports ကစားသမားများအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split အတွက် စာရင်းများပေးသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း PUBG MOBILE ကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split ပြိုင်ပွဲ၏ Online Registration ကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း စာရင်းပေးသွင်းကာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ ဒီတစ်ခါ Myanmar Championship ပြိုင်ပွဲက စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကို တက်လှမ်းသွားနိုင်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေက အကောင်းဆုံး အသင်းတွေနဲ့ ပြိုင်ရမှာဆိုတော့ မြန်မာအသင်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလားအလာကောင်းတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ တွေ့ထားရလို့ ကျွန်တော်တို့ Myanmar Championship ပြိုင်ပွဲမျိုး ကို မြန်မာမှာပဲ ပြုလုပ်တာပါ။ အဲဒီအတွက် မြန်မာ့အတော်ဆုံး အသင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး PMCO SEA Final ပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ် ” ဟု PUBG MOBILE ၏ ကုမ္ပဏီ Tencent Thailand ၏ Head of Gaming Operations ဖြစ်သူ Mr. Andrew Manugian က ပြောသည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် ကစားသမားများသည် အသင်းအသီးသီးဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ အဆင့် နှစ်ဆင့်ဖြင့် Online Qualifier ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများသည် First Round ပွဲစဉ်ကို မတ်လ ၁ ရက် မှ မတ်လ ၁၂ ရက်အထိ ကျပန်းအုပ်စုခွဲပြီး တစ်အုပ်စုလျှင် အသင်း ၂၀ ဖြင့် အုပ်စု ၆၀ ခွဲကာ အွန်လိုင်းတွင် First Round စတင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အနိုင်ရရှိသူများအနေဖြင့် Second Round ပွဲစဉ်ကို မတ်လ ၁၃ ရက်မှ မတ်လ ၁၆ ရက်အထိ First Round မှ အဆင့် ၁ နှင့် ၂ ရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း စုစုပေါင်း အသင်း ၁၂၀ သင်းသည် ပြိုင်ပွဲကို တစ်အုပ်စုလျှင် ၁၅ သင်းဖြင့် ၈ အုပ်စုခွဲ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်လုပွဲအဆင့် တက်ရောက်သည့် အသင်း ၁၆ သင်း နှင့် ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် PUBG MOBILE Myanmar Championship Offline ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီမှ ပထမနှင့် ဒုတိယရရှိသော အသင်း ၂ သင်း၊ စုစုပေါင်း ၁၈ သင်းသည် PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split ပြိုင်ပွဲကြီးသို့ တက်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Yangon Convention Centre ၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင် ပြုလုပ်မည့်ပြိုင်ပွဲတွင် အဆင့် ၁ အနိုင်ရသည့် အသင်းကို ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်း ၁၅၀)၊ အဆင့် ၂ ရရှိသည့် အသင်းကို ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်း ၁၀၀)၊ အဆင့် ၃ ရရှိသည့် အသင်းကို ၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သိန်း ၆၀)၊ အဆင့် ၄ ရရှိသည့် အသင်းကို ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်း ၃၀)၊ အဆင့် ၅ မှ ၈ ရရှိသည့် အသင်းများကို ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်စီ (ကျပ် ၁၅ သိန်းစီ)၊ အဆင့် ၉ မှ ၁၈ ရရှိသည့် အသင်းများကို ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်စီ (ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ) အသီးသီး ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split ပြိုင်ပွဲမှ အနိုင်ရရှိသော မြန်မာအသင်း ၄ သင်းနှင့် လာအို၊ စင်ကာပူ၊ ဘရူနိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အရှေ့ တီမောနိုင်ငံများမှ Online ပြိုင်ပွဲများမှ အနိုင်ရရှိသော အသင်း ၁၂ သင်း၊ စုစုပေါင်း အသင်း ၁၆ သင်း တို့သည် PMCO SEA Wildcard Final အဆင့်အတွက် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို တစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ယင်းပြိုင်ပွဲတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ စင်ကာပူ၊ အရှေ့တီမော၊ ဘရူနိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Next articleMinistry Requests Easing of Travel Restrictions in Kayah